ITOOBIYA OO Si ADag uga hadashey KHILAAFKA suudan iyo Itoobiya sheegteyna in Dibada ka riixayaan dalal shisheeye – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA ITOOBIYA OO Si ADag uga hadashey KHILAAFKA suudan iyo Itoobiya sheegteyna in...
ITOOBIYA OO Si ADag uga hadashey KHILAAFKA suudan iyo Itoobiya sheegteyna in Dibada ka riixayaan dalal shisheeye
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Itoobiya ayaa soo saartay bayaan adag oo ay ku sheegtay in Itoobiya “ay si adag u aaminsan tahay in khilaafka ay ka dhawaajinayaan garabka militariga ee dowladda Suudaan uu u adeegi karo oo kaliya danaha dhinac saddexaad iyada oo ay ka faa’iideysanayaan dadka reer Suudaan.”
Wasaaraddu waxay sidoo kale cambaaraysay “sida ugu adag uguna macquulsan kordhinta iyo dabeecadaha daandaansiga ah ee dowladda Suudaan ee ku saabsan arrinta xadka u dhexeeya Itoobiya iyo Suudaan.”
Bayaanka ayaa yimid labo maalmood ka dib markii Wasaaradda Arimaha Dibada ee Suudaan ay u yeedhay Gamal al-Sheikh, Safiirka Sudan u fadhiya Ethiopia, guriga “wada tashiyada ku saabsan xuduudaha iyo biyo xireenka weyn ee Itoobiya (GERD)”, sida uu sheegay afhayeenka wasaarada arimaha dibada Suudaan, Danjire. Mansour Boulad.
Mar sii horeysay, Itoobiya waxay tiri “Ciidanka Suudaan waxay burburiyeen hay’adihii maamulka ee Itoobiya, waxay la wareegeen xeryo militari, waxay dileen oo barakiciyeen dadkii deganaa, waxayna burburiyeen dalagyadii iyo hantidoodii. Suudaan waxay si cad ugu xadgudubtay sharciga caalamiga ah ee ka dhanka ah adeegsiga xoogga iyo heshiisyada dib-u-calaamadeynta xuduudaha. ”
Hadalka ka soo baxay Wasaaradda Arimaha Dibada ee Itoobiya ayaa yimid kadib markii la soo cusbooneysiiyay codsi lagu xallinayo khilaafka xuduudaha ee ka imanaya mas’uuliyiinta iyo dadka deggan galbeedka Gonder zone ee gobolka Amxaarada halkaas oo ciidamada Suudaan ay sii wadaan duullaanka. Hunalem Ashagre, oo ah madaxa xisbiga talada haya ee Propperity Party (PP) ee aagga West Gonder, ayaa u sheegay warbaahinta gobolka in “Suudaan ay ku xad gudubtay xuduudaha Itoobiya gaar ahaan aagga West Gonder; xoog ayey kula wareegtay Kuwara ilaa Abutir.
Sida laga soo xigtay Hunalem, duulaanka ayaa sababay burbur baaxad leh oo hantiyeed iyo barakaca dadkii deegaanka, sida uu sheegay Hunalem. In ka badan 1.5 bilyan oo ETB hanti ah ayaa la bililiqaystay, dalagyada beeralayda iyo maalgashadayaasha deegaanka, cagafyo iyo kaamam ayaa labadaba la bililiqaystay oo la burburiyey. Dadkii deganaa Selamber Kebele sidoo kale waa barakaceen, inkasta oo uusan carabaabin tiro ahaan.
Bayaankii ugu dambeeyay ee ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya laguma xusin “qeybta saddexaad” laakiin tilmaamo dhowr ah ayaa farta ku fiiqay Masar.
Talaadadii Diseembar 22, ESATtv, oo ah shabakad telefishan oo caan ku ah baahinta macluumaadka sirta ah ee laga helo ilaha dawladda, ayaa ku warantay in Masar ay isku dayeyso inay cadaadis ku saarto Itoobiya iyada oo loo sii marayo dalalka deriska la ah. Iyaga oo soo xiganaya ilo lagu kalsoonaan karo oo ka tirsan dowladda shabakadda ayaa sheegtay in Masar ay si bareer ah u turjumeyso howlgalka milatari ee dowladda federaalka ka wado Tigray waxayna ku cadaadineysaa dalalka deeqaha bixiya inay jaraan kaalmada la siiyo Itoobiya. Waxa kale oo ay sheegtay in safaaradda Masar ee Addis Abeba ay ku hawlan tahay inay si khaldan u wargaliso diblomaasiyiinta EU-da ee fadhigoodu yahay magaalada si ay u yeeshaan aragtiyo shaki leh oo ku saabsan hawlgalka ka socda Tigray, iyagoo ku biirinaya go’aanka Midowga Yurub ee ka joojinta gargaarka Itoobiya.
Markii la weydiiyay inuu ka hadlo eedeyntan, xafiiska af-hayeenka ee wasaarada ayaa Addis Standard u sheegay in Ethiopia aysan wali wax mowqif ah ka qaadan arinta maadama ay wax taagan yihiin maxaa yeelay nooca taageerada la sheegay “ma cadda.” “Masar waxay xaq u leedahay inay garab istaagto Suudaan laakiin si cad looma cadeyn inay Suudaan ku taageerayso taageero militari ama qaabab kale,” ayuu yiri xafiiska, isagoo intaas ku daray in dowladda Itoobiya ay qaadan doonto mowqifkeeda haddii ama ka dib taageerada Masar ay tahay loo tarjumay ficillo ama ka dib markay caddeeyeen nooca taageerada la sheegay.
DHAMMAAN DHAMMAAN DHAQAN-GELINTAAN IYO DHAQANKA AAN LAHAYN EE SUDAN, ITOOBIYA AYAY MUUJISAY FALANQEYNTA BADAN EE SAMIRKA, WAY KA HOR YAHAY IN LAGA SOO CELIYO XUQUUQDA IS-IS-QAADASHADA IYO WAQTIGA AY LEEDAHAY DIIWAANKA LA LEEYAHAY.
In kasta oo xiisaddu ay sii kordheyso, Itoobiya waxay tiri “waxaan jeclaan lahaa in aan ugu baaqo dadka reer Suudaan in ay hubiyaan in dowladdeeda ay u adeegto dan saddexaad oo kaliya taas oo keeneysa in laga hortago labada qaran. Intaa waxaa sii dheer, Itoobiya waxay ka codsaneysaa dalalka Afrika ee walaalaha ah inay kala taliyaan dowladda Suudaan inay arrimaha xuduudaha ku dhammaystirto qaab nabadeed oo jira. ”
Qoraal Buuxa Oo Ka Soo Baxay Wasaaradda Arimaha Dibada Itoobiya
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Dimuqraadiga ah ee Itoobiya waxay si adag u cambaareyneysaa sii kordheysa iyo dabeecadaha daandaansiga ah ee dowladda Suudaan ee la xiriira arrinta xadka u dhaxeysa Itoobiya iyo Suudaan. Itoobiya waxay aaminsantahay in khilaaf kasta oo labadeena dal udhaxeeya uu kaliya ka dhalan doono waxyeello weyn oo wadareed ah oo khatar gelinaysa wanaagga labada qaran. Sidaa darteed, dawladda Itoobiya waxay si xoog leh u aaminsan tahay in khilaafka ay ka dhawaajinayaan garabka militariga ee dawladda Suudaan uu u adeegi karo oo keliya danaha dhinac saddexaad iyadoo ay kharash ka bixinayso dadka reer Suudaan.
Waxaa xusid mudan in labada dowladood ay leeyihiin farsamooyin ku filan oo ay kula macaamilaan sheegashooyin kasta iyo sheegasho xuduudeed ama sheegasho dhuleed kasta. Si kastaba ha noqotee, Ciidanka Qaranka ee Suudaan wuxuu ku xadgudbay mabaadi’da aasaasiga ah ee sharciga caalamiga ah iyo xallinta nabadeynta khilaafaadka iyagoo si aan macquul ahayn ugu soo duulay Itoobiya horraantii Noofambar 2020. Marka ay sidaas sameyneyso, Suudaan waxay jabisay heshiisyadii xuduudaha labada geesood, ee dhigayay in aan la barakicin muwaadiniinta labada dal midkoodna beerahooda oo ay si wada jir ah u diiwaangeliyeen labada Dawladood, xaaladooduna sida ay tahay lagu sii hayn doono illaa inta kiiska heshiis looga gaadhayo.
Dhinaca Suudaan ayaa sidoo kale meesha ka saaray oo wiiqay dadaalkii ay wadeen gudiyada xuduudaha ee wadajirka ahaa kuwaas oo dadaal aan kala go ‘lahayn ugu jiray sidii loo soo afjari lahaa geeddi-socodka dib-u-calaamaynta xadka guud. Si ka soo horjeedda ruuxda saaxiibtinimo iyo iskaashi ee ka dhexeeya labadeena dal ee walaalaha ah, Ciidanka Suudaan waxay bililiqaysteen hanti, waxay gubeen xeryo, waxay weerareen oo ay barakiciyeen kumanaan Itoobiyaan ah waxayna xakameeyeen Xeryihii Milatariga Itoobiya ee la faaruqiyey.
Waxa ka sii xun ayaa ah, in si khaldan looga been sheego xaqiiqooyinka dhulka, Suudaan waxay si ula kac ah ugu howlan tahay ololeyaal been abuur ah oo ka dhan ah Itoobiya iyadoo ku eedeysay dhibanaha inuu yahay gardarro, kana baxsato la xisaabtanka iyadoo loo weecinayo eedeymaha loona weecinayo dagaalkeeda iyo sii wadista daandaansigeeda iyadoo la isku dayayo. si loo xukumo dhulal badan.
Inta lagu gudajiray dhamaan dabeecadahan kacdoonka iyo daandaansiga ah ee Suudaan, Itoobiya waxay muujisay dulqaad badan, waxaa laga joojiyay inay adeegsato xuquuqdeeda sharciga ah ee isdifaacida iyo waqtiga waxayna markale muujisay sida ay uga go’an tahay in si nabad ah lagu xaliyo khilaafaadka ku saabsan soohdinta iyadoo la adeegsanayo heshiisyada labada dhinac iyo farsamooyinka xadka wadaagga ah. Waxa loo baahan yahay waa rabitaan siyaasadeed oo labada dowladood ah, kaas oo u suurta gelin lahaa inay ku gaaraan xal nabadeed.
Itoobiya waxay si adag u aaminsantahay xiriirka walaaltinimo ee soo jireenka ah ee udhaxeeya shacabka Itoobiya iyo Suudaan iyadoo aan loo eegin nooca ay yihiin dowladahooda. Isku dayga ay wadaan ciidamada Suudaan ee ah inay ku riixaan shucuubta saaxiibka la ah Itoobiya iyo Suudaan dagaal aan loo baahnayn waa khalad aad u culus oo wiiqaya nabaddooda, xasilloonida iyo horumarka labada ummadood gaar ahaan iyo guud ahaan gobolka.
Itoobiya iyada oo ku celcelineysa sida ay uga go’an tahay in si nabad ah lagu xaliyo arrinta xuduudaha, waxay mar kale ugu baaqeysaa dowladda Suudaan in ay ka laabato gardarrada, kana waantowdo daandaansiga oo ay xal nabadeed u hesho arrinta xuduudaha.
Sidaa darteed, dowladda Itoobiya waxay jeclaan laheyd inay ugu baaqdo shacabka Suudaan inay hubiyaan in dowladdeeda aysan u adeegin dan saddexaad oo kaliya taasoo ka dhalan karta iska horkeenka labada qaran. Intaa waxaa sii dheer, Itoobiya waxay ka codsaneysaa dalalka Afrika ee walaalaha ah inay kala taliyaan dowladda Suudaan inay arrimaha xuduudaha ku dhammaystirto qaab nabadeed oo jira.
Dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Dimuqraadiga ee Itoobiya waxay sidoo kale uga mahadcelineysaa dadka reer Itoobiya sida ay u muujiyeen dulqaadka ugu badan iyo fahamka qotada dheer. MoFA
Previous articlemagaalooyinka ugu badan cudurkaHIV / AIDS ee wadanka Itoobiya
Next articleSomaliland oo ka Qayb-galaysa Tartan Orodada Caalamiga ah
Duqa Muqdisho oo dhagax dhigay dib u dhiska suuqa Dayax.